About us - SHANDONG ZIBO YIHAOJIA AUTO IZINGXENYE CO., LTD
IZibo Yihaojia Auto Parts Co., Ltd.
Yonke imikhiqizo yethu yama-brake pad isidlulile yadlula i-ISO / TS16949: 2009 standards and AMECA cortification.
Yini i-Brake Pad?
Ibhuleki lebhuleki, ingxenye ebaluleke kunazo zonke yezokuphepha ohlelweni lokubopha izimoto, oludlala indima enkulu kuwo wonke amandla wokumisa.
Ama-brake pads ngokuvamile enziwe ngepuleti elisekelayo, izingqimba zokunamathisela zokunamathisela kanye namabhulokhi wokushayisana, aqukethe izinto zokudlulisa okungezona ukushisa ngezinhloso zokuvikela.
Ibhulokhi yomshikashika yenziwa ngezinto zokuxabanisa nokunamathela, okucindezelwa kubhuleki yedriki noma isigubhu samabhuleki ukukhiqiza ukungqubuzana, ukufeza inhloso yokwehlisa ukubopha kwemoto.
Njengomphumela wokushayisana, amabhulokhi okuxubana azogqokwa kancane kancane, Uma into yokushayisana isiqediwe, iphedi yamabhuleki kufanele ishintshwe ngesikhathi, kungenjalo ipuleti esekelwayo nediski yamabhuleki kuzoxhumana ngqo, okuzogcina kulahlekile umphumela wamabhuleki nokulimaza i-disc brake.
USHANDONG ZIBO YIHAOJIA AUTO PARTS CO., LTD ungumholi wamaphakethe wamabhuleki ezenzakalelayo atholakala eZhangdian District, eZibo City, eSifundazweni saseShandong .Kungumkhiqizi wepads wamaphakethe wezimoto futhi wasungulwa ngo-2001.
Iyinkampani yokuqala yokukhiqiza amabhuleki ezenzakalelayo e-Zibo, esifundazweni saseShandong.
Le nkampani ineminyaka engu-20 yomlando wokuthuthuka, ukucubungula nokukhiqizwa kophawu lwe-OEM iminyaka engu-15.
Ucwaninge futhi wakha ama-non-asbestos, i-semi-metal, i-less-metal ne-ceramic formulation njll.
Yonke imikhiqizo yethu yama-brake pad isidlulile i-ISO / TS 16949: 2009 standards kanye ne-AMECA certification.
Sisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme ezingenisiwe nezasekhaya ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Izinzuzo zethu zomkhiqizo zifaka phakathi amandla okuma angcono, ukumelana nokugqoka okuthuthukile, futhi akukho thuli nomsindo.
Ukukhiqizwa komthamo wamasethi ayizigidi ezi-3, onamamodeli womkhiqizo angaphezu kuka-2000, amakhava endawo yomsebenzi nesitolo samamitha ayisikwele ayi-16000.
Ukukhiqizwa umthamo 3 amasethi
ngamamodeli womkhiqizo angaphezu kuka-2000
Amakhava ezindawo zokusebenza esitolo samamitha-skwele ayi-16000.
Le nkampani ineminyaka engu-20 yomlando wokuthuthuka
ukucubungula nokukhiqizwa kophawu lwe-OEM iminyaka engu-15.